Etu esi eyi akwa akpụkpọ ụkwụ na jeans, dị ka ndị ama ama siri kwuo - Ụdị
Etu esi eyi akwa akpụkpọ ụkwụ na jeans, dị ka ndị ama ama siri kwuo
Uwe isii ị ga -eyi ugboro ugboro.
uwe ime ga -eyi na leggings
Etu ị ga -esi jiri akpụkpọ ụkwụ Jeans na -eyi akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ịdị nfe dị ka ịnwe ma booties na jeans yana iyi ha ọnụ - mana ha abụghị. Ụfọdụ ụdị akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-ele anya nke ọma na mgbatị ụkwụ nwere ogologo nkwonkwo ụkwụ; ndị ọzọ pụtara na a ga-ahụ naanị ha ka ha na-apụta n'okpuru otu akwa jeans sara mbara. Mgbe ahụ, enwere akpụkpọ ụkwụ ojii siri ike nke enwere ike iji akwa jeans ọ bụla. Ndị ahụ na -enye ọkachamara booties na jeans nhọrọ na -enweghị njedebe mana nhọrọ na -akpọnwụ akpọnwụ maka onye ọhụrụ.
Ihe niile ekwuru, ịkọwapụta otu esi eyi akwa akpụkpọ ụkwụ na jeans bụ ụdị rut kacha dị mfe edozi n'ebe ahụ. Ihe kpatara ya? Jeans na booties bụ ndị ama ama ama ama ama ama ama kemgbe 2000s 'Juicy tracksuit na Uggs. Mgbe anyị tụlechara ụzọ niile ndị ama ama siri jikọta akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na jeans, anyị abanyela n'ime ụzọ isii adịghị mma iji eyi ha. Yabụ ọ bụrụ na ị hụla akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ suede na -acha uhie uhie na oyi kpọnwụrụ, ejighị n'aka nke jeans ga -ejikọ akpụkpọ ụkwụ nkwupụta, echegbula: Ekike isii ndị a bụ maka gị.
Ụkwụ kwụ ọtọ Slouchy
Akpụkpọ ụkwụ ndị dabara n'akụkụ dị elu ekwesịghị izo n'okpuru uwe ma ọ bụ jeans akpa. Ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị warara, tinye akwa jeans gị n'elu akpụkpọ ụkwụ gị ka ikwe ka akpụkpọ ụkwụ ndị ahụ na -enwu. Emily Ratajkowski yi akpụkpọ ụkwụ ya na-acha ọcha nwere jeans kwụ ọtọ, na-ekepụta ihu na-elegharị anya ebe denim na-ezute akpụkpọ anụ.
Emily Ratajkowski na -egosi otu esi eyi booties na jeans ụzọ ochie.
Tan suede booties bụ ọkpụkpụ azụ nke ihe mkpuchi akwa oyi. Gini mere ị ga -eji wuo akpụkpọ ụkwụ na jeans gị gburugburu ha? Jikọta otu akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-ada ada na nkwonkwo ụkwụ gị na akwa ogologo 7/8 na ịsa ọkara. Mpekere ndị ọzọ dịịrị gị ma ọ bụrụhaala na ha dabara na ezinụlọ kamel ma ọ bụ tan -mana ọ bụrụ na ị na -eyi akwa dị elu, jide n'aka na ị ga -enye ya akwa akwa French. N'ebe ahụ ị nwere ya: uwe jeans na booties nke ga -adị n'ụdị ruo ọtụtụ afọ, dị ka nke Cindy Crawford.
Uwe jeans na akpụkpọ ụkwụ Cindy Crawford bụ ihe na-enweghị isi.
Pop nke Agba
Ọ bụrụ na ị na -eche ka esi eyi akwa akpụkpọ ụkwụ na jeans mgbe akpụkpọ ụkwụ gị bụ agba na -adịghị mma -acha odo odo, fuchsia, ị kpọrọ ya aha - ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị. Mgbe akpụkpọ ụkwụ gị na -enwu gbaa, ka ha bụrụ akụkụ nkwupụta nke uwe gị - ezobela ya site n'ime ka anya gị niile yie otu agba. Hilary Duff akpụkpọ ụkwụ suede na-acha odo odo na-agbagide megide akwa jeans ya siri ike n'ihi na ha bụ naanị akụkụ pink ya (na n'ihi na ha anaghị ezo n'okpuru ogologo ụdị denim).
Ndị hụrụ agba n'anya, elela anya karịa uwe Hilary Duff.
ọtụtụ agba mbọ na -ewu ewu 2021
Ụkwụ kwụ ọtọ Vintage
Levi's 501s bụ ọkacha mmasị ama ama ebighi ebi. Mgbe ị na -ahọrọ akpụkpọ ụkwụ ị ga -eyi na ha, ị ga -achọ ụdị nwere ụdị ọmarịcha mkpụrụ osisi denim. Kendall Jenner nwere echiche ziri ezi na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ya na-egbochi ikiri ụkwụ. Debe ha n'okpuru jeans kwụ ọtọ wee mechaa jaketị a kpụrụ akpụ, ị nwekwara ụkwụ ruo ọtụtụ ụbọchị.
Jeans na akpụkpọ ụkwụ Kendall Jenner nwere mmetụ ochie.
Site n'echiche bara uru, akpụkpọ ụkwụ stiletto dị ka akwa Lea Michele na-echekwa akwa ukwu ma ọ bụ akwa denim ka ọ ghara ịdọrọ n'ala. Site n'echiche ụdị, obere stiletto bootie ikiri ụkwụ dị iche na jeans na -agba agba. Anyị nọ n'ọgbọ nke ụdị ejiji ka ọ dị ugbu a, yabụ jiri akwa turtleneck dị mkpụmkpụ kpuchie uwe elu ukwu.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị elu nwere ihe nkiri ọzọ n'okpuru otu jeans sara mbara.
ụdị jeans kacha mma maka ụmụ nwanyị
Mgbọ ọgba tum tum
Ụmụ nwanyị na -abụghị ndị na -akwado ikiri ụkwụ, anyị nwere gị. Bootị ọgba tum tum ka bụ ọkacha mmasị ama ama-naanị lee uwe Brie Larson na-anaghị arụ ọrụ. Akpụkpọ ụkwụ ọgba tum tum bụ nke nwere ọmarịcha jeans nke kụrụ n'elu nkwonkwo ụkwụ; Kedu ihe ejiri naanị okirikiri na nnukwu eriri, a chọghị ka akpụkpọ ụkwụ ndị a were akwa denim kpuchie ya.
Brie Larson na -ewepụta punk na jeans na booties.
ngwa ọgụ kacha mma maka nwanyị
juvederm volbella egbugbere ọnụ tupu na mgbe
otu esi ehicha mgbanaka diamond nke igwe ojii